Kedu ihe kpatara Spain na -egbochi nnukwu ohere maka njem nlegharị anya ụwa?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Kedu ihe kpatara Spain na -egbochi nnukwu ohere maka njem nlegharị anya ụwa?
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Njem nlegharị anya ụwa na -akwado maka ọdịnihu dị mma na COVID na -achịkwa ya.
Nke a bụ nzaghachi ọtụtụ ndị na -eme njem na njem njem ụwa.
Iji mee ka Njem Nleta Ụwa rụọ ọrụ ọzọ ọ ga -ewe ndị ndu na ndị nwere ọhụụ. Ọ na -ewekwa ndị mmadụ njikere ma nwee ike ime ihe.
Njem nlegharị anya ụwa chọrọ enyemaka ngwa ngwa na UNWTO anaghị ada ada idu ndú, mgbe ụfọdụ na -eji egwuregwu usoro na egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na -ejichi ọganihu.
Saudi Arabia ewerela ọrụ nke onye ndu ụwa yana mba ndị otu UNWTO bụ isi.
Ministri njem nlegharị anya nke Saudi Arabia kpọrọ 1000 nke uche kacha mara mma na njem nke na -abịa Nnọkọ nke ọgbakọ mmadụ na Riyadh.
Dị ka onye otu Network Tourism Network, Nnukwu oge maka njem nlegharị anya ụwa na -eme na alaeze Saudi Arabia.
Njem nleta na-agabiga ihe ịma aka ndị na-agaghị ekwe omume kemgbe mmalite nke 2020 n'ihi ọrịa COVID-19.
Na Saudi Arabia, Minista njem nlegharị anya HE Ahmed Al-Khateeb anọwo na-egosi ihu ọ bụghị naanị na mba nke ya. Ọ bụla kpakpando na -egbu maramara nke olileanya site na Caribbean ruo Afrịka.
Alaeze ahụ ekenyela ijeri kwuru ijeri dọla ọ bụghị naanị maka mmepe nke ike njem ya na -aga n'ihu kamakwa iji nyere ụwa ndị ọzọ aka ka ngalaba ahụ na -ese n'elu mmiri.
The Tourtù Na-ahụ Maka Njem Nleta Worldwa (UNWTO) na-enwe nsogbu idu ndú ebe odeakwụkwọ ukwu ya na-egwu egwuregwu abụọ.
Saudi Arabia nọ ebe ahụ iji nyere aka na diplọmaị na ego. Na Mee afọ a, UNWTO mepere mpaghara mpaghara na Riyadh. Ọzọkwa WTTC, nzukọ nke UK na -anọchite anya ọtụtụ ndị nwere onwe ha na njem njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ mepere mpaghara mpaghara na Riyadh.
N'ịghọta ọnọdụ siri ike UNWTO nọ na nkwado ezughi oke sitere na Spain n'ezie, Saudi Arabia gosipụtara mmasị ya iweta òtù ụwa a site na Madrid na Riyadh.
Ntugharị dị otu a ga -achọ nkwado sitere n'aka ndị otu UNWTO na Mgbakọ General UNWTO na -abịanụ na Morocco. Ọkachamara nọ nso okwu a buru amụma na etinyerela votu ndị dị mkpa maka ịkwaga ebe a, n'agbanyeghị na Alaeze ahụ arịọghị ya.
Asịrị maka ụdị mmegharị a mere ka Spain na ụfọdụ ndị ha na EU jikọrọ aka karịa ịmata ihe. Mmegharị diplọma n'azụ ihe nkiri a na -aga n'ihu, dịka ntụkwasị obi siri dị eTurboNews isi mmalite.
Otu onye nnọchi anya UNWTO sitere na mba EU tụkwasịrị obi na njem nlegharị anya gwara eTurboNews, ọ nwere ikike ịtụ vootu dịka ọ masịrị ya, ọ ga -eme ntuli aka maka ịkwaga ma ọ bụrụ na ntuli aka.
Prime Minista Spain kpọrọ Saudi Prince ihe dịka otu ọnwa gara aga. E boro ebubo ihe kpatara oku a bụ ebumnuche nke Riyadh nwere ike ịkwaga isi ụlọ ọrụ UNWTO.
Izu abụọ gara aga Onye odeakwụkwọ UN Antonio Guterres tinye aka, na ejigidere ọrụ a dabere na nkwekọrịta a ga -emechi n'etiti onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya Saudi na ndị otu ya, ndị minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Spain.
Onye maara mkparịta ụka a n'etiti Saudi Arabia na Spain kwuru eTurboNews: “Mkparịta ụka n'etiti Spain na Saudi Arabia na -aga n'ihu mana akụkụ Saudi na -enwe nkụda mmụọ na ọsọ nke ọganihu. FII njedebe nke Ọktoba ga -abụ nnukwu oge maka njem, yana ọtụtụ ndị ozi na ndị isi azụmahịa na Riyadh. Ka anyị nwee olile anya na Maroto nọ ebe ahụ. ”
Hon Reyes Maroto bụ Mịnịsta njem nlegharị anya nke Spain.
Ọkachamara ama ama na nkwanye ugwu na Europe dị nso na UNWTO, onye na -achọghị ka akpọpụta ya eTurboNews:
“Ọ bụrụ na Spain chere na ụzọ igbu oge pụtara na ha na -egbochi Saudi Arabia ịga n'ihu na mkpọsa ịkwaga UNWTO na Riyadh, mgbe ahụ ha nwere ike bụrụ ihe na -ezighi ezi. A ka nwere oge ịkwanye. Ka ọ dị ugbu a, Maroto nọ na Italytali, na mmemme azụmahịa, ihe ọ na -elekwasị anya abụghị njem nleta. “
Ebe ọzọ gwara eTurboNews"Ọ dị ka Spain nwere nkwa na isi ihe Saudi Arabia rịọrọ maka igbochi ịrịọ arịrịọ isi ụlọ ọrụ a."
Agbanyeghị, ọ na -egosikwa na ọsọ nke imecha nkwa a nwere ike ịbụ okwu na -agbagha ndị Saudis.
eTurboNews gakwuuru ndị Spen na Minista njem nlegharị anya Saudi. Enwetaghị nkọwa ọzọ.
Canada weputara njem njem ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ ...
Ulcerative colitis: A na-enye ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọhụrụ ...
Ụgbọ elu Guyana ọhụrụ na Barbados na InterCaribbean
St. Maarten: Ndị ọbịa nwere ọgwụ mgbochi ọrịa anaghị achọ...
Tel Aviv kpọrọ obodo ọhụrụ kachasị ọnụ n'ụwa ibi ...
Na-aga Jamaica na-alọghachi na Montego Bay
Qatar Airways mbụ ịbanye na IATA CO2NNECT…
Ebe 4 n'ime 5 kacha mma n'akụkụ osimiri dị na US
Okporo ụzọ na Republic: Barbados ahọrọla nke mbụ ...
Ụlọ ọrụ na-eme njem na-eji teknụzụ eme ihe nke ọma ...
Ebe njem kacha mma maka 2022
Spain ga-anọgide na-ekpo ọkụ na 2022
Ụlọ ezumike USO ọhụrụ na-akwado ndị ọrụ na Pittsburgh ...